DG3 —— Orinasa mpamokatra fakantsary sy mpiorina faran'izay hazavana APS-C malaza indrindra indrindra | Rainpoo
Ny fakantsary oblique malaza indrindra sy mahazatra
RIY-DG3 dia fakan-tsarimihetsika manjary tanjona. Manana tombony amin'ny lanja maivana izy, habe kely, halavany mifototra, mifanentana ambony ary fandaniam-bola fikojakojana ambany. Ary ny fanaparitahana hafanana ao anaty DG3 sy ny rafitra manaparitaka dia manome antoka fa hiasa maharitra ny ny fakantsary amin'ny tontolon'ny maripana ambony. Ny DG3 dia azo apetaka amin'ny drone kilasy indostrialy rehetra eny an-tsena izay azo entina amin'ny elatra kely miorina amin'ny herinaratra ho an'ny fampahalalana angon-drakitra marobe na azo apetraka amin'ny drôna marolafy hahazoana fahazoana angon-drakitra avo lenta .
Haben'ny fakantsary 170 * 160 * 80mm
Lanja fakan-tsary 650g
Elanelam-potoana farafahakeliny ≤0.8s
Fahatsiarovana 320g / 640g
Hafainganan'ny kopian'ny data ≥80m / s